6 caadooyinka cunnada waa in qof kastaa barto
1. Cab biyo ku filan
Waxaad u baahan tahay inaad cabto biyo. Tani waxay dedejinaysaa M. Boschmann, J. Steiniger et al. Thermogenesis-ka ay biyuhu keeneen / Joornaalka Endocrinology Clinical & Metabolism metabolism. Dhiiggu waa 92-95% biyo, dareeruhuna wuxuu ka caawiyaa habka wareegga dhiigga inuu la qabsado shaqadiisa. Biyo, ogsijiin iyo gulukoos ayaa la siiyaa maskaxda, kuwaas oo lagama maarmaan u ah dhaqdhaqaaqa dareenka. Biyuhu waxay maskaxda ka saaraan alaabta dheef-shiid kiimikaadka iyo sunta. Laakin yaraanteedu waxay sababi kartaa fuuq-bax / Mayo Clinic madax-xanuun, dareen daal, dhibaatooyin xagga dheefshiidka.
Ma jiro heer caalami ah oo isticmaalka biyaha. U fiirso laba tilmaame:
Dareen haraad. Haddii aad haysato, waxaad u baahan tahay inaad cabto.
Midabka kaadida. Waa inay ahaataa mid aan midab lahayn ama huruud khafiif ah, haddii kale ma cabbid kugu filan.
Sida loo horumariyo caado
Khasaaraha ugu weyn ee nolosha: biyuhu waa inay had iyo jeer ku jiraan gacanta. Haddii kale, waxaad noqon doontaa caajis inaad u kacdo mar kasta oo aad wax cabto, oo waxaad samayn doontaa marar ka yar inta aad dhab ahaantii rabto. Dhig dhalo biyo ah miiskaaga oo kabo mar kasta oo aad harraad dareento. Had iyo jeer ku qaado weelka yar boorsadaada hana ilaawin inaad dib u buuxiso.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira codsiyo kala duwan oo kuu ogolaanaya inaad la socoto qadarka aad cabto. Khasaaraha ugu weyni waa waxqabadka bartilmaameedka. Dadaalka aad ku doonayso inaad ku gaadho yoolkaaga, waxaad cabbi kartaa marka aanad dareensanayn inaad wax cabto, ama aad si degdeg ah ugu shubto naftaada wakhti dambe oo habeenimo ah si aad hadafkaaga u gaadho. Laakiin haddii aad jeceshahay tirooyinka iyo gamificationka, waxaad isku dayi kartaa.
2. Cun khudaar iyo khudaar badan
Cuntooyinka dhirta ayaa faa'iido u leh ka hortagga cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga iyo noocyada kansarka qaarkood. Fiberka ay ku jiraan waxa uu caawiyaa habka dheefshiidka in uu si fiican u shaqeeyo waxa uuna yareeyaa qaadashada sare ee faybarka cuntada iyo miraha isku dhafan ee la xariira hoos u dhaca khatarta cudurada aan la kala qaadin.
Waxaan ognahay faa'iidooyinka khudaarta iyo miraha tan iyo caruurnimadii, laakiin mar walba suurtagal ma aha in la cuno tiro ku filan. Waxaa intaa dheer, daraasadihii ugu dambeeyay ee D. Aune, E. Giovannucci et al. Qaadashada khudradda iyo khudradda iyo khatarta cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, kansarka wadarta iyo dhammaan dhimashada – dib-u-eegis nidaamsan iyo falanqeynta qiyaasta qiyaasta daraasadaha mustaqbalka / Joornaalka Caalamiga ah ee Epidemiology ayaa sheegaya in heerka caadiga ahi yahay 500-800 g maalintii, iyo tan badan.
Halkan, la mid ah biyaha: haddii aad rabto in aad cunto khudaar badan, ka dhig iyaga mid la heli karo. Si aad qorshaha u rumowdo, waa inaad ka fikirtaa sababta khudaarta ay marti ugu yihiin miiskaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad cunto salad kaabajka ah maalin kasta, laakiin aad ayaad u caajisay inaad ku jarjarto mindi. Kadib doorashadaada, mashiinka cuntada oo leh shredder. Waxa uu ku shiidi doonaa madaxa kaabajka muddo ilbiriqsi ah, waxa soo hadhayna waa in uu biyo ku maydho weelka iyo mindiyaha, xataa isbuunyo looma baahna.
Ama, marar badan, waxaad soo iibsataa khudaar aanad jeclayn, sababtoo ah waxaa lagugu hagayaa macluumaadka dibadda, oo aan ahayn dareenkaaga. Aynu sheegno in celery runtii caafimaad qabto, laakiin haddii aad necbaato, markaa waxay u degi doontaa sida miisaanka dhintay ee khaanadda khudradda.
Dhaq miraha oo isla markiiba miiska saar, si ay u jirto fursad badan oo gacantaadu ay iyaga lafteeda ku gaari karto. U diyaari khudaarta la cuni karo sidoo kale. Ulaha qajaarka, ulaha karootada, qaybo yaryar oo kaabash ah ayaa si degdeg ah loo cuni doonaa haddii ay si cad u muuqdaan.
Ugu dambayntii, iska hubi in cunto kasta oo aad cunto ku jirto kab dhireed. Marka hore waxay noqon kartaa wax laga xumaado, laakiin si tartiib tartiib ah ayaad ula qabsan doontaa.
3. Hayso xusuus-qor cunto
Dadku waxay u muuqdaan inay ku khiyaaneeyeen qaddarka la cunay. Waxaan u janjeernaa inaan dhayalsanno SW Lichtman, K. Pisarska et al. Farqiga u dhexeeya qaadashada kaloriinta ee la sheegay iyo kuwa dhabta ah iyo jimicsiga maaddooyinka cayilan / Mugga cuntada ee New England Journal of Medicine, xitaa haddii aan ognahay in dib naloo eegi doono. Sidaa darteed, waxay aad ugu badan tahay inaadan laftaadu ka warqabin caadooyinkaaga cunto.
Xusuus-qorku wuxuu kaa caawin doonaa inaad fahamto sida ay arrimuhu dhab ahaantii yihiin, oo aad wax badan uga barato naftaada. Tusaale ahaan, waxay kuu muuqataa inaad cunayso khudaar kugu filan, laakiin dhab ahaantii waxaad ku xaddidan tahay laba qajaar maalintii.
Qor waxaad cuntay, inta iyo cadadkee, isla markaaba cuntada ka dib, ama xitaa ka hor, haddii aad iska ilaalin karto kabista. Dooro hab ku habboon oo lagu duubo macluumaadka: buug-yaraha, dukumeentiga daruuraha, ama abka tirinta kalooriga.
By habka, ku saabsan dambe. Haddii aad jeceshahay saxnaanta wax kasta, waxaad sidoo kale ogaan kartaa inta kaloori ee aad isticmaasho. Natiijadu waxay noqon doontaa qiyaas, maadaama aadan sheegi karin inta nafaqo ee laga nuugi doono cunto gaar ah. Laakin macluumaadkan waxaa mar hore loo isticmaali karaa in lagu saxo hab-dhaqanka cunnada. Run, dhammaan cuntada waa in la miisaamaa: arrinta xisaabinta kalooriyooyinka, wax walba waa horeba aad ugu dhow yihiin in lagu qiyaaso cabbirka qaybta isha.
4. Cun sonkor yar
Ninka casriga ah wuxuu cunaa sonkor aad u badan, sababtoo ah waxaa laga heli karaa meel kasta. Waxa laga helaa ma aha oo kaliya soodhaha ama alaabta la dubay, laakiin sidoo kale ketchup, badarka degdega ah, iyo sausage.
Dhacdooyinka nooca 2-aad ee xanuunka macaanka, beerka oo shaqadiisa gabay, ilkuhu qudhuntay, cayilka iyo waxyaabo kale oo aan fiicnayn ayaa lala xiriiriyaa isticmaalka sonkorta badan. Markaa waa lagama maarmaan in la xakameeyo qaddarkeeda cuntada.
Ku bilow wax yar: Markaad harraadsan tahay, cab biyo, ha cabbin casiir ama soodhaha. Markaad iska ilaaliso cabbitaannadan, waxaad mar hore yaraynaysaa qaadashada sonkortaada. U beddel shaaha iyo kafeega oo aan la macaanayn.
Yaree cunista macmacaanka, ka dhig mid macne leh. Taa baddalkeeda, ku dar qayb ka mid ah karbohaydraytyada adag ee qaabka badarka cuntada. Tani waxay sahlaysaa in loo dulqaato joojinta sonkorta.
Ugu dambeyntii, wax badan kari naftaada. Wax-soo-saarayaashu waxay ku dembaabaan iyagoo sonkorta ku dara badeecadaha halkaas oo aadan weligaa filaneynin inaad aragto. Markaa waxaad taas iska caabin kartaa oo keliya adigoo u kacaya shooladda.
5. U fiirso halabuurka iyo kaloriyada cuntada
Wax-akhrinta ayaa waxtar leh, gaar ahaan marka ay timaado calaamadaha cuntada. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad ogaato in muesli-caafimaadeedka aad ugu jeceshahay uu yahay sonkorta kala bar oo uu ka sarreeyo shukulaatada kalooriyooyinka. Akhrinta madadaalada leh ee noocan oo kale ah waxay ku siin doontaa daahfuryo badan.
Calaamadaha barashada waxay qaadataa waqti. Sidaa darteed, qorshee safarradaada dukaanka si aad u hesho daqiiqadahan bilaashka ah. Hubi in aad wax cunto ka hor inta aanad soo iibsan, haddii kale caloosha qayladu waxay maanshaysaa codka caqliga. Dabcan, ha kaxaysan dadka safarka ah ee kula socda, kuwaas oo istaagi doona oo qaylinaya inta aad halkaas qodayso wakhti dheer.
6. Si joogto ah u cun waxyaabaha caanaha laga sameeyo
Hal qaadasho oo caano khamiir leh maalintii waxay caawisaa MB Zemel, W. Thompson et al. Calcium iyo dardargelinta caanaha ee miisaanka iyo luminta dufanka inta lagu jiro xaddidaadda tamarta ee dadka waaweyn ee cayilan / Cayilka Cilmi-baarista si loo yareeyo miisaanka iyo dhimista M. Chen, Q. Sun et al. Isticmaalka caanaha iyo halista nooca 2-aad ee sonkorowga: 3 kooxood oo qaan-gaar ah oo Maraykan ah iyo falanqaynta-meta oo la cusboonaysiiyay / Daawada BMC 18% khatarta nooca 2 ee sonkorowga. Si kastaba ha ahaatee, way fiicantahay in la doorto ikhtiyaari aan sonkor lahayn: way ka caafimaad badan yihiin.
Haddii aad hesho badeecad aad jeceshahay, dhib kuma jiri doonto dhisidda caado. Laakiin, sida caadiga ah, aqoontayada ku saabsan caanaha dhanaanku waxay ku kooban tahay kefir iyo caano fadhi macaan. Qof kastaa ma jecla kan kowaad, kan labaadna waxa ku jira sonkor aad u badan. Laakiin waxaa jira doorasho.
Marka hore, isku day wax kasta oo dukaamada ay bixiyaan, sida caanaha la dubay, kefir, Snezhok, acidobifilin, varenets, caano fadhi dabiici ah. Waxaa ka mid ah, hubaal inaad ka heli doonto waxaad jeceshahay. Haddii aysan jirin badeecad dhadhankaaga, isku day isku-darka. Tusaale ahaan, samee smoothie ku salaysan kefir.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 6 caadooyinka cunnada waa in qof kastaa barto!